साल्ट ट्रेडिङको २५ सय मेट्रिक टन चिनी बुधबार आइपुग्दै - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News साल्ट ट्रेडिङको २५ सय मेट्रिक टन चिनी बुधबार आइपुग्दै
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको २५ सय मेट्रिक टन चिनी बुधबार आइपुग्ने भएको छ । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत कम भन्सार दरमा आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । सरकारको सो अनुमतिअनुसार साल्ट टे«डिङले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी भिœयाएको हो ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार मेट्रिक टन र खाद्यकम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । खाद्यकम्पनीले सो चिनी दसंैपछि मात्र ल्याउन सक्ने बताएको छ भने साल्ट टे«डिङले सो चिनी २५ सय मेट्रिक टन बुधबार वीरगञ्जको नाका आइपुग्ने जानकारी दिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका विभागीय प्रमुख ब्रजेशकुमार झाले बुधबार २५ सय मेट्रिक टन चिनी वीरगन्ज नाका पुग्ने बाँकी चिनी त्यसको केही दिनपछि निरन्तर आउने बताए । विभागीय प्रमुख झाले सरकारले साल्ट टे«डिङलाई चिनी आयात गर्न अनुमति ढिला दिएको हुँदा चिनी आयात गर्न केही ढिला भएको बताए ।
उनले भने, ‘चिनीको मौज्दात कम हुने देखिएपछि सरकारलाई गत माघ महिनामा नै चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरेका थियौं । तर, सरकारले हामीलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति भदौ महिनाको अन्तिममा मात्र दिएको हुँदा चिनी आयातमा ढिला भएको हो ।
यदि सरकारले हामीले आयातको अनुमति माग गरेको समयमा नै चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको भए उपभोक्ताले अहिले बजारबाट महँगो चिनी किनेर खानुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । उनले भने, ‘पहिलो लटको चिनी बुधबार नेपाल आइपुग्छ । दोस्रोलट भने विजया दशमीसम्म आइपुग्नेछ ।
दसैंको केही दिन बिदा हुने हुँदा बीचमा दुई-चार दिन आउने छैन नत्र भने अब सरकारले साल्ट टे«डिङलाई आयात गर्न दिएको अनुमतिअनुसार चिनी निरन्तर आयात हुनेछ । विभागीय प्रमुख झाले भने, ‘अहिले हामीसँग धेरै मौज्दात नहुँदा हामीले थोक व्यापारीलाई बिक्री गरेका छौं । खुद्रामा मात्र बिक्री गरिरहेका छौं । २५ सय मेट्रिक टन आइपुग्दा थोक व्यापारीलाई पनि बिक्री गर्नेछौं । साल्ट ट्रेडिङको चिनी आएपछि बजारमा बढेको चिनीको मूल्य पनि घट्ने झाको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस थप १२७२ जनामा कोरोना पुष्टि, १६ जनाको मृत्यु
अहिले खुद्रा बजारबाट प्रतिकेजी चिनी उपभोक्ताले ८५ रुपैयाँदेखि ९५ रुपैयाँ तिरी रहेका छन् । तर, साल्ट ट्रेडिङ बजारमा मूल्यभन्दा प्रतिकेजी १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म सस्तो बिक्री गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले बजारको मूल्यभन्दा हरेक खाद्यवस्तु सस्तो र गुणस्तरीय बिक्रीवितरण गर्दै आएको झाले बताए ।
साल्ट ट्रेडिङ दसैंतिहार चाडवर्पलाई विशेष छुट गरेर काठमाडौंका विभिन्न पाँच स्थानबाट खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । यसैगरी देशका विभिन्न कार्यालयबाटै बाहिरबाट पनि उपभोक्तालाई छुटमा खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गरी रहेको छ ।
विभागीय प्रमुख झाका अनुसार विभिन्न प्रकारका चामलको प्रतिबोरामा ५० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँ छुट बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । यसैगरी विभिन्न प्रकारका दाल, गेडागुडी प्रतिकेजी ३ देखि ५ रुपैयाँसम्म छुटमा दिएको छ ।
चिनी प्रतिकेजी ७३ रुपैयाँ बिक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङले अहिले दसंैतिहारका लागि प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ छुट गरेर ७० रुपैयाँमा दिएको छ । सोही चिनी अहिले बजारमा ५ रुपैयाँदेखि ९५ रुपैयाँमा पर्ने गरेको छ ।
यसैगरी २० रुपैयाँ पर्ने नुनलाई साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी २ रुपैयाँ छुट गरेर १८ रुपैयाँमा दिने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको खाद्यवस्तु बजारको भन्दा सस्तो र गुणस्तरीय हुने साल्ट ट्रेडिङको दाबी छ ।
श्रीकृष्ण सिग्देल - December 5, 2020
तुलसी भण्डारी - December 5, 2020
प्रदेश ३ सविन शर्मा - December 5, 2020
एजेन्सी । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले अमेरिकीहरुलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लिनका लागि जबरजस्ती बाध्य नपारिने बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्जा र बचतमा ब्याजदर बढ्ने
खोप उपलब्ध भएपछि सबैलाई व्यक्तिगत इच्छाका...
खेमराज गौतम - September 8, 2020
गलकोट । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा यही भदौ १७ गते आएको बाढीले ठूलोमात्रामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ । रातको समयमा बाढी आउँदा सुतेका स्थानीयवासीसँगै ढोरपाटनका...
एजेन्सी - April 6, 2020
वासिङ्टन । अमेरिकाको बिमान निर्माता कम्पनी बोइङले कोरोनाभाइरसको महामारीका पछि जारी लकडाउनका कारण वासिङ्टन राज्यमा रहेको आफ्नो कारखाना अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने...
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - July 14, 2020
तुलसीपुर । रुखको हाँगा भाँच्चिएर लाग्दा तुलसीपुरको लहलौरामा मोटरसाइक चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ लहलौरा निवासी २३ बर्षका तुलसी चौंधरी...
नेपालमा कसैलाई कोरोना भाइरस भेटिएको छैन : निर्देशक डा. झा
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 5, 2020
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक डा. रुना झाले नेपालमा ‘कसैलाई पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)’ संक्रमण नभेटिएको स्पष्ट पारेकी छन् । अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणक्रममा...
बिचार रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ - September 29, 2020
चोरको खोजीमा पोशाकसहित भारतीय प्रहरी दैलेखमा
प्रदेश ६ भक्तबहादुर शाही - March 17, 2020
दैलेख । दैलेखका एक युवकले ५० लाख भारतीय रुपैयाँ चोरी गरेर दैलेख आएको भन्दै चोर पक्राउ गर्न भारतीय प्रहरी पोशाकसहित सोमबार साँझ दैलेख सदरमुकाम...
थप छ कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
प्रमुख रासस - October 31, 2020
विराटनगर । मोरङका विभिन्न अस्पतालमा पछिल्लो १२ घण्टाको अवधिमा थप छ जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु हुनेहरुमा नोबेल शिक्षण अस्पताल...
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी - February 5, 2020
वासिङ्टन । अमेरिकी इतिहासमा संसदको सभामुखले कुनै राष्ट्रपतिले संसदमा गरेको वार्षिक सम्बोधन भाषण संसदकै रोष्ट्रममा च्यातिदियो भन्ने...
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी - December 5, 2020